Naya Bikalpa | यसो गर्दा पार्टीको जिम्मेवारी पाउने र नपाउने कार्यकर्ताबिच विभाजन निम्त्याउँछ - Naya Bikalpa यसो गर्दा पार्टीको जिम्मेवारी पाउने र नपाउने कार्यकर्ताबिच विभाजन निम्त्याउँछ - Naya Bikalpa
यसो गर्दा पार्टीको जिम्मेवारी पाउने र नपाउने कार्यकर्ताबिच विभाजन निम्त्याउँछ
प्रकाशित मिती: २०७७ श्रावण १९, १३: ४३: १०
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाअधिवेशन नजिकिँदै गर्दा काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व बढीरहेको छ । विधिवत महाअधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र गठन गरी सक्नुपर्ने विभिन्न विभागहरु अर्को महाअधिवेशनको मुखमा आएर गठन गरीएको भन्दै पौडेल समूह आक्रोसित भएको छ ।
महाअधिवेशनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी हाल गठन गरीएको विभिन्न विभागहरु भङ्ग गर्नुपर्ने अडान राख्दै पौडेल समूहले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन समेत गरी सकेको छ ।
पौडेल समूहमा हाल कृष्ण प्रसाद सिटौला बाहेक पुरानो संस्थापन पक्षको नेताहरु एकै भएको देखिएको भएता पनि १४औं महाअधिवेशनको सभापति पदमा को उठ्ने भन्ने टुंगो लागेको देखिदैन ।
वर्तमान संस्थापन समूहबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम मात्र चर्चा चलिरहँदा पौडेल समूहबाट भने वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेल, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाको नाम चर्चामा छन् ।
यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर पौडेल समूहका युवा नेता गुरुराज घिमिरेसँग हाम्रा सम्वाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
१३औं महाअधिवेशन पछि पनि किन सँधै पार्टी सभापतिको मात्रै बढी आलोचना गरीरहनु भएको हो ?
विलकुलै आलोचना गरिएको होइन । अहिले पार्टी केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । हामीले आगामी फागुन ७ गते महाधिवेशनको आयोजना गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौं । र, हामीलाई विधानले दिएको अधिकार बमोजिम काम गर्न १३औं महाधिवेशनपछि कुनै वाधा व्यवधान थिएन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले विभाग गठन गर्न र पदाधिकारीहरु बनाउन समयमै सकेनौं । त्यसैगरी भातृ, शुभेच्छुक संस्थाहरुको अधिवेशन, महाधिवेशन पनि समयमै गर्न सकेनौं । जब अहिले महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल भइसक्यौं । क्रियाशील र नविकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसक्यो । पार्टी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट महाधिवेशनमा होमिसक्यो । अब हामी पार्टीका विभागहरु गठन गर्नेदेखि अन्य कामहरु गर्न थालेका छौं ।
जसरी अहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी हो त्यसबाट विचलित हुने । महाधिवेशन प्रभावित हुने । साथै समयमै महाधिवेनशन सम्पन्न गर्न नसकिने र कार्यकर्तामा पनि ठूलो विभाजन आउने जस्तो देखिएकोले यो काम अहिले गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
पार्टीका विभागहरु गठन गर्ने काम पार्टी सभापतिको होईन र यसमा के–को आपत्ति ?
त्यसमा आपत्ति प्रकट गरेको थिएन । विभागहरु बनाउने काम पार्टी सभापतिकै हो । त्यो गर्न उहाँलाई वाधा, व्यवधान उत्पन्न गरी कहिल्यै पनि काम गरिएन ।
पार्टीको प्रतिस्पर्धी समूहले उहाँको कामलाई कहिल्यै पनि अवरोध गरेन । त्यो हुँदाहुँदै समयमा किन गर्न सक्नुभएन त्यसको जवाफ उहाँले नै दिने हो । महाअधिवेशनको कार्यतालिका आईसकेपछि विभाग गठन गर्ने काम हो त ?
तर सभापतिले समयमै विभाग गठन गर्न खोज्दा रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइरालाले नामहरु दिन नसकेको भन्ने छ नी के हो ?
हामीले पार्टीको विधान बनाएको किन ? पार्टीको विधान बनाएको त पालना गर्न होला । विधान भनेको पार्टीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने दस्तावेज हो । त्यसले निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरुलाई हामीले पालना गर्ने हो । पार्टीको विधान बनाएको देखाउनका लागि मात्रै बनाइएको होइन ।
त्यो विधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई जब हामी अक्षरसः पालना गर्दैनौं भने विधानको औचित्य समाप्त हुन्छ । मुलुकको संविधान पालना गर्नका लागि बनाइएको हो । संविधान बनाइएको मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नको लागि हो नि । त्यो कुराको हामीले अनुसरण गरेनौं भने त्यसको औचित्य सिद्धिन्छ । त्यसैगरी पार्टीको पनि विधानको औचित्य सिध्याउने काम हामीले एकपछि अर्को गरिराखेका छौं ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भनेको विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि विधि र प्रक्रियाले नै चल्ने हो । लोकतन्त्र भनेको विधि, पद्वतिबाट चल्ने राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसैगरी लोकतान्त्रिक दल पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै चल्छ ।
पार्टीभित्रै विधि र प्रक्रियाको पालना भएन भने हामीले मुलुक र जनतालाई कस्तो कुराको सन्देश दिन खोजेका छौं ? त्यसैले पार्टीको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्री, अन्य पदाधिकारीहरुले यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । तर, त्यो काममा एकपछि अर्को गर्दै कमजोरी प्रदर्शन गर्दै गइराखेका छौं ।
पार्टी सभापतिले अहिले जसरी एकपछि अर्को काम गर्दै जानुभएको छ, त्यसैमा तपाईहरुको आपत्ति हो ?
अहिले जे काम गरिँदैछ, त्यो पहिला किन नभएर महासिधवेशनको मुखमा आएर भइरहेको छ ? नेताहरुबीच सहमति र समझदारी किन हुँदैछैन ? पार्टीभित्र लामो इतिहास बोकेर सँगै लडेर आएका नेताहरुबीच किन झगडा र द्वन्द्व हुँदैछ ? नेताहरुबीचमा समझदारी भएर काम होस् भनेर हामीले वारम्बार भन्दै आएका छौं ।
अहिलेसम्म नेताहरुको समझदारीमै पार्टीको विधान मान्दै आएका हौं । अहिले महाधिवेशनको मुखमा विभिन्न खाले झगडाहरु गरिराखेका छौं । त्यसमा पनि अझ विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गराइराखेका छौं । यसरी विभिन्न पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने हलर बढेको बेलामा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा झगडा गरेर तमासा जुन देखाइराखेका छौं ।
जसरी पार्टीभित्र बिग्रहरु ल्याउने काम गरिराखेका त्यसले राम्रो सन्देश दिइराखेको छैन । किन नेपाली कांग्रेस सामू इतिहासले धेरै ठूलो जिम्मेदारी, अविभारा सुम्पेको छ । अहिले मुलुक संकटमा छ, मुलुकमा हामीले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा छ । आमलोकतन्त्रवादीहरु निराश छन्, आम नेपाली जनताहरु निराश छन् ।
अहिले मुलुकमा कोरोनाको कहर, बाढीपहिरोको प्रकोपले देशै आक्रन्त छ । यस्तो बेलामा पार्टीलाई आन्तरिक रुपबाट व्यवस्थित बनाउने काममा नेताहरु किन लाग्नुहुन्न ? नेताहरु किन मिलेर एकै ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्न ? शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइ त एउटा जेनेरेसनको पुरानो नेता हो नि । उहाँहरु एक, दुई, तीन दिन एकैठाउँमा बसेर एउटा समझदारी बनाएर अगाडि बढ्न किन सक्नुहुृन्न ? यो कुरा त राम्रो पटक्कै भएको छैन ।
त्यसोभए अहिलेको अवस्थामा सभापतिले चालेको कदम पार्टीको विधान बिपरित छ होइन त ?
एकदमै पार्टीको विधानले तोकेको समयसीमामा काम नगरेर थाती राखिएको कामलाई अहिले हामी महाधिवेशनको मुखमा सम्पन्न गर्न खोज्दै छौं । यसले पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा ठूलो विभाजन ल्याएको छ ।
विभाग गठन गर्ने र नगर्ने, विभागमा जाने र नजाने, मनोनयनमा पर्ने र नपर्ने, पार्टीको जिम्मेवारी पाउने र नपाउने भनेर कार्यकर्ता पङ्तिमा ठूलो विभाजन आएको छ । ती जिम्मेवारी पाउने साथीहरुले पनि काम गर्ने समय छैन ।
सबै साथीहरु महाधिवेशनको प्रक्रियामा हिड्ने कि विभागको बैठक राखेर काम गर्ने ? विधानअनुसार जसरी विभागहरुले विभिन्न, पेशा व्यवसायमा संलग्न साथीहरुको काम गर्ने जिम्मेवारी छ । कि ती क्षेत्रमा काम गर्न जाने, विभागका गतिविधिहरु अगाडि बढाउने कि पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ?
त्यसोभए गोविन्दराज जोशी र पुष्करनाथ ओझालाई कारबाही गर्नु गलत छ भनेर तपाईंहरुले भनिरहनुभएको छ अनि सुनिलबहादुर थापालाई पार्टीमा भित्र्याएर सह–महामन्त्री बनाउँदा तपाईंहरुलाई किन आपत्ति ?
नयाँ पार्टीमा अरु पार्टी छोडेर नयाँ साथीहरु आउनुभएको छ, त्यसलाई हामीले आपत्ति जनाएकै छैन नि । त्यसलाई त अझ हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेका छौं ।
यसरी अन्य पार्टी छोडेर नेपाली कांग्रेसमा आउने साथीहरुलाई त हामीहरु अझ स्वागत गर्न तयार छौं । यसरी अन्य पार्टीबाट सबैभन्दा पुरानो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आउनु त अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
तर, तपाईंहरुले सभापतिले गरेको हरेक कामप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको कारण चाही के हो ?
त्यो सरसल्लाह नभई भयो भन्ने कुरा चाहीं आएको छ । यो विषय पनि पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेका साथीहरुबीचमा सरसल्लाह त हुनुपर्छ नि ।
सरसल्लाहबाटै एउटा निक्र्यौलमा पुगेर पदको वितरण अथवा पदले सुशोभित गरेको भए भैहाल्थ्यो नि । यसरी साथीहरुलाई भित्र्याउँदा सरसल्लाह भएन भन्ने गुनासो होला । यो प्रक्रियामा हामीहरु सरिक पनि छैनौं । कसरी भएको भन्ने सरसल्लाह पनि छैन ।
तर, अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका साथीहरुलाई त हामी सबैले स्वागत गरेकै छौं ।
त्यसोभए सुनिल थापालाई सह–महामन्त्री बनाएकोमा मात्रै असन्तुष्टि हो ?
यो राजनीतिक निर्णयबाट भएको कुरा हो । सूर्यबहादुर थापा नेपालको राजनीतिमा बेग्लै पहिचान भएको व्यक्ति । उहाँसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ।
उहाँकै छोरो जस्ता नेताहरु आउँदा खुसीको कुरा हो । त्यसले हाम्रो संगठनात्मक शक्ति अभिवृद्धि गर्छ नै । हाम्रो संगठनात्मक आधार क्षेत्र बढाउँछ नै । त्यसको लागि स्वागत छ । उहाँजत्तिको मान्छेलाई पद दिँदा चाहीं अन्य नेताहरुसँग सरसल्लाह भएन भन्ने कुरा उहाँहरुकै अभिव्यक्तिबाट हामीहरुले बाहिर थाहा पाएको हो ।
त्यसोभए गोविन्दराज जोशीलाई कारबाही गर्नुहुँदैन भन्ने हो तपाईंहरुको भनाई ?
गोविन्दराज जोशी र पुष्करनाथ ओझा नेपाली कांग्रेसमा लामो समय काम गर्नुभएका आदरणीय नेताहरु हुनुहुन्छ । अर्को रामबहादुर विष्टजी पनि कारबाहीमा पर्नुभएको छ । अनुशासन समितिले सर्वसम्मत ढंगले कारबाही गरेको छ । त्यस अब त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले पुनरावलोकन गर्ने एउटा बाटो छ ।
यो पार्टीले गरेको सर्वसम्मत निर्णय हो । त्यसमा पनि अनुशासन समितिले गरेकोले यो निर्णयलाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को व्यक्तिगत रुपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुलाई कारबाही भएकोमा एकदमै दुःख लागेको छ ।
सकेसम्म पार्टीभित्र लामो योगदान गरेको नेताहरुलाई कारबाही गरेर उहाँहरुको राजनीतिक जीवन समाप्त पारिदिँदा यसले कार्यकर्तामाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । अझ नेता, कार्यकर्ताबीचमा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ ।
२०७७ श्रावण १९, १३: ४३: १०